Bokin' ny Fahendrena - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fahendren'i Salomona)
Ny Fahendren' i Salômôna na Bokin' ny Fahendrena dia boky ao amin' ny Baiboly katôlika sy ny Baiboly ôrtôdôksa izay voasokajy ao amin' ireo boky deoterôkanônika. Mamaly ny fahendrena ivelan' ny fivavahana jiosy, indrindra fa ny filôzôfia grika, ity boky ity. Miresaka ny amin' ny fitsanganan' ny tena amin' ny maty sy ny famoronana vaovao ny mpanoratra sady manambara fa tsy ho mety maty sady tsy ho mety lo ny fanahin' olombelona. Milaza ny valisoa ho azon' ny olo-marina sy ny sazy hoan' ny olon-dratsy koa ny boky ary asehony fa famirapiratan' ny fahasambarana mandrakizay ny Fahendrena izay maneho ny hatsaram-pon' Andriamanitra. Ny Prôtestanta dia manakilasy ny boky ho apôkrifa. Tsy hita ao amin' ny Baiboly hebreo koa ny Bokin' ny Fahendrena.
1 Anaran' ny boky
2.1 Ny valisoan' ny olo-marina sy ny hanjo ny olon-dratsy
2.2 Fankalazana ny Fahendrena
2.3 Ny Fahendrena sy ny tantaram-pamonjena
Atao hoe Σοφία Σaλωμῶνος / Sofia Salômônos ny anaran' io boky io amin' ny teny grika ao amin' ny Septoaginta. Amin' ny teny latina izy dia atao hoe Liber Sapientiae (izay midika hoe "Bokin' ny Fahendrena") ao amin' ny Volgata satria resy lahatra i Zerôma (na Hierônimo), ilay nisahana ny fandikana ny Baiboly amin' ny fiteny latina (Volgata), fa tsy i Salômôna no nanoratra azy. Atao hoe Bokin' ny Fahendrena izy ao amin' ny Baiboly Masina (Baiboly katôlika amin' ny teny malagasy).
Azo zaraina telo ny Bokin' ny Fahendrena:
Ny valisoan’ ny olo-marina sy ny hanjo ny olon-dratsy (1.1 – 5.23)
Fankalazana ny Fahendrena (6.1 – 9.19)
Ny Fahendrena sy ny tantaram-pamonjena (9.20 – 19.22)
Ny valisoan' ny olo-marina sy ny hanjo ny olon-dratsyHanova
Ny fiainana ao amin’ ny finoana dia amporisihina noho ny tombontsoa entiny ho an’ ny olona. Ny valisoan’ ny hatsaram-panahy dia ny Fahendrena (Fah. 1); izany dia mametraka ny olan’ ny ny olo-marina iharan’ ny fanenjehana kokoa noho ny olon-dratsy izay tsy mahita afa-tsy ny zava-misy amin’ izao fiainanan eto ambonin’ ny tany amin’ izao fotoana izao, ka mitarika azy hanao zavatra mihoa-pampana. (Fah. 2). Sambatra lavitra noho ny mpanota ny olo-marina, na dia eo aza ny fahoriana mahazo azy eto an-tany. Samy ho faty sady samy ho tsaraina na ny olo-marina na ny olon-dratsy (Fah. 3 – 4) nefa ny olon-tsy mino dia diso hevitra (Fah. 5).
Fankalazana ny FahendrenaHanova
Ao amin’ ny fizaràna faharoa, dia misy resaka manokana ataon’ ny mpanoratra ho an’ny mpitondra vahoaka. Noho ny halehiben’ny andraikiny dia ho lehibe kokoa ny fitsarana miandry azy (Fah. 6.1-10); noho izany, tokony hiezaka hahazo ny Fahendrena izy ireo (Fah. 6.11-27). Ny ohatra velona amin’izany dia ny mpanjaka Salômôna (Fah. 7.1-12) izay nisehoan’ ny voninahitry ny famirapiratan’ ny Fahendrena (Fah. 7.13-21). Ambaran’ ny mpanoratra amin’ ny antsipiriany ny amin’ ny Fahendrena (Fah. 7.13-8.20) sy ny fomba hananana azy (Fah. 8.21-9.19).
Ny Fahendrena sy ny tantaram-pamonjenaHanova
Ao amin’ ny fizaràna fahatelo dia fandalinana ny amin’ i Salômôna ka iresahana ny Fanambaràn-tenan’ Andriamanitra, hatramin’ny andron’ i Adama, izay nisehoan’ ny fanamarinana ireo fampianarana sy famporisihana. Izany dia tohin’ ny ao amin’ ny toko faha-9 izay ahitana vavaka sy fiderana an’ Andriamanitra. Mamerina ny tantaran’ ny Adama sy i Nôe sy i Abrahama sy i Lôta sy i Jakôba sy i Jôsefa sy i Môizy (Fah. 10), avy eo dia miresaka ny zava-nanjo ny Zanak’ i Israely tao Ejipta sy ny nivoahany avy ao (Fah. 11) ny mpanoratra. Voaresaka koa ny nanjo ireo Kanaanita (Fah. 12) sy ny hadalana ary ny fanompoan-tsampy izay nisy tamin’ izany (Fah. 13 – 15). Avy eo ny boky miverina amin’ny tantaran’ ny Zanak’ i Israely tao an-tany efitra (Fah. 16). Mamisavisa ireo loza nahazo ny Ejipsiana koa izy ka atombony amin’ny aizim-pito tao amin’ ireo Ejipsiana izay nifanohitra tamin’ ny fahazavana tao amin’ ireo Hebreo izany (Fah. 17), avy eo ny famonoana ny voalohan-teraky ny Ejipsiana (Fah. 18.1-9), ary farany ny niampitan’ ny Zanak’ i Israely ny Ranomasina Mena sy ny naharingananan’ ny tafiky ny Faraôna (Fah. 19). Izany rehetra izany dia asehon' ny mpanoratra fa manamarina ny tokony hikatsahana ny Fahendrena sahala amin' ny nataon' i Salômôna.
Boky ao amin'ny Ketuvim ao amin' ny Baiboly hebreo: Salamo - Ohabolana - Jôba - Tononkira Fanaperana - Rota - Fitomaniana - Mpitoriteny - Estera - Daniela - Ezra-Nehemia - Tantara
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_ny_Fahendrena&oldid=1041856"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 02:56
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 02:56 ity pejy ity.